Kenya oo sheegtay inay dacwad ka gudbin doonaan Dowladda Soomaaliya - Awdinle Online
Kenya oo sheegtay inay dacwad ka gudbin doonaan Dowladda Soomaaliya
Afhayeenka Dowlada Kenya Col. Cyrus Oguna oo xalay Warbaahinta kula hadlay Madaxtooyada Kenya ee Magaalada Nairobi ayaa ka hadlay khilaafka xoogeystay ee kala dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo go’aanka ay qaadan doonaan.
Waxaa uu sheegay in Soomaaliya go’aankii ay xiriirka ugu jartay uu ahaa mid ay ku deg degeen, hayeeshee labada dal ay yihiin kuwo deris iyo Walaalo ah, isla markaana aysan ka aarsan doonin, isaga oo sheegay inay dacwad ka gudbin doonaan.
“ Dowlada Soomaliya waa ay deg degtay ma aheyn, Anagoo Walaalahood ah in ay xiriirka noo Jaraan, waxaan nahay deris iyo Saaxiibo aan kala maarmin hadana kama aarsan doono balse waxaan Cabashadeena u gudbin doonaa IGAD,COMESA iyo African Union si naloo heshiisiiyo ayuu yiri” Col. Cyrus Oguna.
Sidoo kale Afhayeenka Dowlada Kenya Col. Cyrus Oguna waxaa uu hadalkiisa intaasi uu ku daray in Soomaaliya aan looga baahneyn inay heerkaasi gaarsiiso khilaafka kala dhaxeeyo, waxaana uu ku baaqay inay wada-hadlaan si loo xaliyo wixii ay kala tabanayaan lana dhameeyo khilaafka jira.
Khilaafka u dhaxeeya Dowladaha Soomaaliya & Kenya ayaa xoogeystay, waxaana taasi keentay in dowladda Soomaaliya ay dalka ka saarto safiirkii Kenya, sidoo kale ay u yeerato Safiirkii ka joogay dalkaas, iyada oo 20 bishaan dalka jabuuti lagu qabanayo shir uu soo qaban qaabiyay Urur Goboleedka IGAD, kaas oo looga hadlayo khilaafka Soomaaliya & Kenya.
Previous articleMareykanka oo Markab dagaal u soo diray Xeebaha Soomaaliya
Next articleDowladda Soomaaliya oo sheegtay in Kenya hubeysay jabhad digniina u dirtay